Mustaqbal Ballaaran oo loogu talagalay Dalxiiska Seychelles ayaa dib loo cusbooneysiiyay maanta oo dib loo bilaabay September 1
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Seychelles » Mustaqbal Ballaaran oo loogu talagalay Dalxiiska Seychelles ayaa dib loo cusbooneysiiyay maanta oo dib loo bilaabay September 1
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • News • Dadka • Ammaanka • Wararka Seychelles • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Waaxda Dalxiiska ee Seychelles: Hoggaanka ayaa lagu dhawaaqay
Mustaqbalka Dalxiiska Seychelles ayaa maanta la dejiyay qaab cusub iyo ballamo. Seychelles waxay aqoonsatay muhiimada ay leedahay socdaalkeeda iyo dalxiiskeeda, wadankuna waa midaysan yahay.
Dalxiiska Seychelles wuxuu ku jiraa isbedelo waaweyn laga bilaabo Sebtember 1.
Maamulaha STB Sherin Francis ayaa loo dallacsiiyay xoghayaha guud ee waaxda cusub ee Dalxiiska Jamhuuriyadda Seychelles.
Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Dalxiiska ayaa isku daraya kheyraadka si kor loogu qaado, loo hoggaamiyo, loona nidaamiyo dalxiiska Seychelles si wax ku ool ah.
Wasiirka Arimaha Dibadda iyo Dalxiiska ee Seychelles, Mudane. Sylvestre Radegonde, ayaa ku dhawaaqday qaabdhismeedka cusub iyo ballamaha muhiimka ah ee Waaxda Dalxiiska kulan shaqaale oo si caadi ah loo qabtay Jimcihii, Juun 25, 2021, oo ka socday Botanical House.
Tani waxay daba socotaa Oggolaanshaha Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jimcihii, Juun 25, 2021 ee ka noqoshada Sharciga Guddiga Dalxiiska Seychelles ee 2005, oo ay ansixiyeen Golaha Qaranka Talaadadii, Juun 22, 2021.
Waaxda cusub, oo hoos timaadda aragtida Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Dalxiiska, waxay isku milmeysaa shaqooyinka, shaqaalaha, ilaha, iyo hantida Waaxdii hore ee Dalxiiska oo diiradda saareysay sharciyeynta iyo arrimaha siyaasadda, iyo hay'adda madaxbannaan ee suuq geynta. Guddiga Dalxiiska Seychelles (STB), si loo keeno waxtarka iyo is dhexgalka howlaha si loo hubiyo natiijooyin wanaagsan oo leh ilaha yar.
Wasiirka ayaa u xaqiijiyay 121-ka shaqaale ee Guddiga Dalxiis ee Jasiiradda Seychelles iyo Waaxda Dalxiiska ee ku soo biirtay kulanka oo ka kala yimid Botanical House, Praslin, La Digue, iyo dibedda oo aan midkoodna laga yeeli doonin dib-u-habeynta darteed, iyo weliba, shaqaalaha STB ee u soo guuraya Waaxda ayaa sii haysan doona muddadooda adeeg iyo fasaxa ururay oo, intii suurtogal ah, sii haysan doonta baakidhkooda gunnada.
Qaab dhismeedka cusub, waaxda waxaa madax ka noqon doonta Xoghayaha cusub ee loo magacaabay, Mrs. Sherin Francis. Mrs. Francis waxay soo noqotay Madaxa Fulinta ee STB ilaa 2013 waxayna bedeshay PS Ms. Anne Lafortune.
PS Francis oo ka hadlaysa magacaabisteeda waxay tidhi: “Dalku wuxuu marayaa mid ka mid ah waqtiyadiisii ​​ugu adkaa, waxaana muhiim ah inaan bilowga hore diirada saarno ahmiyadaha ugu waaweyn. In si hufan looga faa'iideysto kheyraadkeenna ayaa muhiim u ah geeddi-socodkaas si aan ugu guuleysanno ujeeddooyinkeenna. Xaqiiqdii waxaan rajaynayaa caqabadda, waxaanan ku tiirsannahay taageerada shaqaalaheenna iyo, ugu yaraan, la-hawlgalayaashayada kala duwan ee hawsha. ”
Xoghayaha Guud waxaa taageeri doona afar cutub oo muhiim ah oo ay hogaaminayaan xirfadlayaal dalxiis oo khibrad u leh aqoonta warshadaha. Tan waxaa ku jiri doona Xoghayn, mas'uul ka ah PR iyo Isgaarsiinta, iyo sidoo kale doorka Iskaashiga Caalamiga ee Waaxda.
Ms. Jenifer Sinon, Ku-xigeenka Madaxa Fulinta ee STB illaa Nofeembar 2016, iyo ka hor, Agaasimaha Fulinta ee Isbitaalka iyo Dalxiiska Seychelles, waxaa loo magacaabay Agaasimaha Guud, Shaqaalaha iyo Qaybta Maamulka.
Mrs. Bernadette Willemin, oo u shaqeynaysay Agaasime Gobol ee STB oo xarunteedu tahay magaalada Paris 11-kii sano ee la soo dhaafay, ayaa madax ka noqon doonta Qaybta Suuqgeynta Goobaha. Waxay caan ku tahay oo ay ixtiraamtaa aqoonyahanada warshadaha dalxiiska iyo dalxiiska ee gudaha iyo dibada, iyadoo leh suuq geyn xoog leh, hagitaan xog iyo hogaamin xiriir la leh, Mrs. Willemin, oo ku soo biirtay STB 1994, ayaa mas'uul ka noqon doonta wadista xayeysiinta iyo suuqgeynta dadaallada dhammaan suuqyada waaweyn, hubinta in Seychelles ay muuqato iyo baahida loo qabo safarka waddanka ay weli sarreyso.
Qeybta Qorsheynta iyo Hormarinta waxaa madax ka noqon doona khabiirka warshadaha Mr. Paul Lebon oo sanado badan ka shaqeynayay waaxda gaarka loo leeyahay. Maadaama uu yahay Agaasimaha Guud, Mr Lebon, oo keena wax soo saar aad loogu baahan yahay iyo sidoo kale aqoonta suuqa iyo cilaaqaadka doorka, wuxuu dusha kala socon doonaa qorshaynta iyo horumarinta meesha loo socdo, isagoo diiradda saari doona kala duwanaanta horumarinta wax soo saarka, siyaasadda, iyo heerarka, dejinta iyo sidoo kale Warshadaha Qorshaynta Shaqaalaha iyo horumarka.
Labadaba Lebon iyo Mrs. Willemin labaduba waxay xilalkooda la wareegi doonaan Sebtember 1, 2021.
Isbeddeladii ugu dambeeyay ee ka socda Golaha Dalxiiska Seychelles ayaa lagu dhawaaqay bishii Janaayo dhexdeeda dhibaatada COVID-19.
LR - Mrs. Sherin Francis, Ms. Jenifer Sinon, Mr. Paul Lebon, Mrs. Bernadette Willemin
Cuthbert Ncube, Gudoomiyaha Guddiga Dalxiiska Afrika, iyo Juergen Steinmetz, Gudoomiyaha Shabakadda Dalxiiska Adduunka, waxay ka mid ahaayeen kuwii ugu horreeyay ee u hambalyeeya mustaqbalka Xog hayaha Guud ee Dalxiiska Seychelles, Sherin Francis. Steinmetz wuxuu yiri, "Dalxiiska Seychelles waxaa loo dajiyay mustaqbal ifaya oo uu hogaamiyo Sherin Francis."
Goor sii horreysay maanta, Madaxweynaha Seychelles Wavel Ramkalawan wuxuu ku soo dhoweeyay Mr. Alain St Ange booqasho salaan ah oo uu saaka ugu tagay Aqalka Madaxtooyada. St. Ange waxay hadda haysaa xilka Madaxweynaha Golaha Dalxiiska Afrika.
Alain St. Ange wuxuu la kulmay Madaxweynaha Seychelles HE Wavel Ramkalawan
Wasiirkii hore ee Dalxiiska, Duulista Hawada, Dekedaha, iyo Badda, Mr. .
St Ange wuxuu ka soo noqday Indonesia ka dib markii uu dhawaan u soo diray lataliye dalxiis oo ku yaal Jakarta. Markii uu ku soo laabtay Seychelles, Mr. St Ange wuxuu kaloo wada hadallo la yeeshay Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Dalxiiska, Mudane. Sylvestre Radegonde.
Kirsten Baete oo Nebraska ah ayaa ku guulaysatay Sands-cad ee Haweenka